यी व्यक्ति जसले एक रातमा सबै गाउलेलाई करोडपति बनाए, यस्तो छ रहस्य ! -
कुनै एउटा गाउँ सिर्फ एक जना मानिसको कारण धनि बन्न सक्छ तर केहि समय गरिएको मिहिनेतले मात्र यो सम्भव छ । तर एक्कै रातमा गाउँभरिका मनिसहरु करोडपति भएका छन् । यो कुरा सुन्दा चलचित्रको नाटकमा भन्दा केहि कम छैन तर उनीहरु साच्चिकै करोडपति बनेका छन्।
Previous २६ सेकेन्डमा यसरी प्रेम व्यक्त गरिरहेका छन् केटीहरु, सोसल मिडियामा पिट्यो तहल्का !
Next आश्चर्यजनक घटना: डाक्टरले यी महिलाको आखाबाट निकाले १४ किरा!